Downoad Zangi Messenger ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Zangi Messenger ကို
Zangi Messenger ကို APK ကို
2G / EDGE ကနေအားနည်းနေကို Wi-Fi နှင့်ဂြိုဟ်တုကွန်ယက်: Zangi, နေရာတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းလျှောက်လွှာများနှင့် messenger ကိုခေါ်ဆိုခြင်းပါဆုံးအဆင့်မြင့်အခမဲ့ HD Voice ကို & ဗီဒီယိုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
နှေးကွေးသောသို့မဟုတ်စျေးကြီးဂြိုဟ်တုကွန်ရက်မှာသုံးစွဲဖို့အဆိုပါအနိမျ့ bandwidth ကို mode ကို•။
• Bypass လုပ်ရ VoIP အင်တာနက်ကန့်သတ်မူဝါဒများနှင့်အတူနိုင်ငံတွင်းရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ mode ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း။
•အခမဲ့ HD ကို Video Chat 720p resolution နဲ့လက်တွေ့အရောင်များမှာ။
•အခမဲ့ HD ကိုအသံပင် 2G / EDGE အောက်မှာတောင်းဆို။
•သင့်ချတ်ပျော်စရာစေရန်စတစ်ကာများ Cool ။
2048 RSA encryption ကိုအတူ•အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကို။
•အလွန်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကြာကြာ 1.5 အချိန်နူန်းကျော်ကျော်ကြာရှည်ဦးမည်, အရင်းအမြစ်များအပေါ်ပွင့်လင်း။
•သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်များအတွက်ဒေသခံနံပါတ်များနှင့်တိုင်းပြည် codes တွေကိုအသိအမှတ်ပြု။
•နီးပါးမျှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု? ရုံ Zangi ပြန်ခေါ်သုံးပါ။
• Calling သည်အခြားဖုန်းများ? စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နိမ့်ဆုံးခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zangi ထွက်ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
- နယူး Group မှ Chat ကို Feature ကို
ကျနော်တို့က "အုပ်စု Chat ကို" အင်္ဂါရပ်မိတ်ဆက်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ထောင့်အပေါ်ကို "နယူးကို Message" icon လေးကိုအသာပုတ်အများအပြားအဆက်အသွယ်ကို select နှင့်သင့်အုပ်စုချတ်ကိုစတင်ပါ။
27.69 ကို MB
လျှို့ဝှက်ဖုန်း, Inc မှ